राजधानीका सडकमा बिहानैदेखि बाक्लिए गाडीहरू… के खुल्छन्, के खुल्दैनन्? हेर्नुस् – PathivaraOnline
Home > समाचार > राजधानीका सडकमा बिहानैदेखि बाक्लिए गाडीहरू… के खुल्छन्, के खुल्दैनन्? हेर्नुस्
राजधानीका सडकमा बिहानैदेखि बाक्लिए गाडीहरू… के खुल्छन्, के खुल्दैनन्? हेर्नुस्
admin June 11, 2020 June 11, 2020 समाचार 0
जेठ २९, काठमाण्डाैं ।
सरकारले गएको ११ चैतदेखि देशभर लागू गरेको लकडाउनको मोडालिटीमा केही परिवर्तन गर्दै नागरिकको जनजीवन केहि सहज बनाई दिएको छ । सरकारले मोडालिटी केहि परिवर्तन गर्दै लकडाउन खुकुलो बनाएसँगै आज (बिहीबार) विहानैदेखि उपत्यकाका सडकहरुमा सवारीको संख्या बढेको छ भने मानिसको चहलपहल पनि शुरु भएको छ ।
बुधबार राति अरेर सकिएको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जोखिम कम भएका क्षेत्रमा पसलहरु खुला गर्ने तथा मोटरसाइकल, निजी कारलगायतका सवारी साधनलाई जोर–विजोर नम्बरका आधारमा चलाउन दिने निर्णय गरेको हो । काठमाडौं उपत्यकासहित जोखिम कम भएका क्षेत्रमा बिहीबारदेखि जोर विजोर प्रणाली लागू गरेर सवारी साधन सञ्चालन हुनेछन् ।
सवारी साधनको पछाडिको अंक जोर भएका सवारी साधन जोर गते र विजोर भएका सवारी विजोर गतेका दिन चलाउन पाउने निर्णय सरकारले गरेको छ । कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा व्यबस्थापन सम्बन्धी केन्द्रीय निकाय सीसीएमसीले निर्धारण गरेको प्रक्रिया पूरा गरी व्यवसाय पनि सञ्चालन गर्न दिने निर्णय सरकारले गरेको छ । यससम्बन्धी बिस्तृत निर्णय भने आज (विहीबार) सार्वजनिक गरिने सरकारका एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन् । स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरु पालना गरेर कृषि, उद्योग, व्यापार खुकुलो गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
के–के खुल्छन्, के खुल्दैनन् ?
सरकारले लकडाउन केहि खुकुलो बनाए पनि कोरोना संक्रमणको जोखिम कम नभएका कारण, विद्यालय, सिनेमा हललगायतका धेरै भीडभाड हुने स्थान भने तत्काल खुल्ला नहुने बताएको छ । सरकारले गएको १० चैतबाट अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकामा आवागमन रोकेको थियो भने ११ चैतबाट लकडाउन गरेको थियो । त्यसयता पटक पटक लकडाउनको समय थप हुँदै आएको थियो ।
पछिल्लो पटक थपिएको लकडाउन ३२ जेठसम्म कायम छ । सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय अपनाएर पसल, व्यापार, व्यवसाय तथा काठमाडौं उपत्यकासहित कम जोखिम भएका क्षेत्रमा चल्ने दिने भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले पसल व्यापार, व्यवसाय र आवागमनमा केही खुुकुलो बनाउने निर्णय गरेको हो । यसबारे बिहीबार आधिकारिक सूचना जारी हुने एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार काठमाडौं उपत्यकासहित कम जोखिम भएका क्षेत्रमा स्थानीय प्रशासनको मूल्यांकनअनुसार पसल व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने भएको छ । औपचारिक निर्णय आएपछि यो लागू हुनेछ ।
गृह मन्त्रालयले तयार गरेको सुरक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार गरेको स्वास्थ्य मापदण्ड सबैले पालना गर्नुपर्ने छ । ट्याक्सी, लामो रुटका गाडी, हवाईजहाजको सम्बन्धमा भने कुनै निर्णय भएको छैन । ‘अहिलेको निर्णयमा यी क्षेत्र परेका छैनन्, स्थिति मूल्यांकन गरेर ती पनि क्रमशः खुल्छन्,’ ती मन्त्री भन्छन् ।
कुन व्यवसाय कसरी खोल्ने, चलाउने र त्यसको मापदण्ड के हुने भन्ने जानकारी सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि एवं अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आज (बिहीबार) आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गर्दैछन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सबै मन्त्रीहरूबाट आएको सुझावलाई एकत्रित गर्नुपर्ने भएकाले आधिकारिक निर्णय बिहीबार सार्वजनिक गर्न लागिएको हो ।
एका बिहानै गोरखामा जल्यो कार
टिपरको ठक्करबाट प्रहरी हबल्दारको घटनास्थलमै निधन
रबि लामिछाने र ऋषि धमाला संगै कलाकार हरु पनि निर्मला पन्तको आन्दोलनमा उत्रीए मानब सागर हेर्नुहोस भिडियो सहित
राहुल र स्मिताको भन्दा अझै मार्मिक कथा: ७ महिना परपुरुषसँग बसेकि श्रीमती फेरि स्विकारे, खुसीले दुबै रोए (भिडियो सहित)